Hitsangana ny vondron’ny taxi mivoatra | NewsMada
Hitsangana ny vondron’ny taxi mivoatra
Tapaka omaly nandritra ny fihaonamben’ny mpisehatra eo amin’ny taxi sy ny mpitantana ny kaominina Antananarivo Renivohitra, fa hatsangana ny fikambanan’ny vondron’ny taxi mivoatra.
Manaraka ny fandaminan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra izy ireo. Manaiky ny fiasan’ny Omavet amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fitaterana ihany koa. Ankoatra izany, mankatoa ny fampiasana ny “lantern” vaovao.
Nambaran’ireto mpitondra taxi mivoatra ireto kosa fa tsy ekena ny fisian’ny resa-bola ao anatin’ny fikambanana satria izay ihany no nitsipahan’izy ireo ny FTAR izay nandrotsahana 1.000 Ar isam-bolana izay vola nolazaina ho fampandehanan-draharaha kanefa tsy fanta-pototra ny fandehan’izany vola izany. Raha atotaly, mitentina hatrany amin’ny 100 tapitrisa Ar mahery isan-taona ny vola naloan’ny taxi ara-dalàna maherin’ny 3.000 tamin’izany fikambanana izany kanefa tsy misy ny mangarahara tamin’ny fandaniana izany.
Handrafitra miaraka ny bokin’andraikitry ny taxi mivoatra ihany koa ireto mpikambana ireto mba tsy hisian’ny fatiantoka be loatra ho azy ireo.
Tetsy andaniny, nilaza ny mpanolotsaina manokan’ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Marc, fa hatao maimaimpoana avokoa ny fiakaran’ny fiara eo amin’ny toeram-pitiliana. Hatao izany hahafahana mamantatra ny lesoka eo amin’ny fiara rehetra manao taxi ka hahafahan’ny tompony manamboatra izany.